WTTC: Safarka ganacsigu wuxuu gaari doonaa saddex-meelood laba meel oo ah heerarkii hore ee masiibada marka la gaaro 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » WTTC: Safarka ganacsigu wuxuu gaari doonaa saddex-meelood laba meel oo ah heerarkii hore ee masiibada marka la gaaro 2022
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Kharashka safarka ganacsiga ayaa la filayaa inuu gaaro saddex-meelood laba meel heerarkii hore ee masiibada marka la gaaro 2022.
Marka loo eego warbixinta cusub, kobcinta ugu yar ee safarka ganacsiga ee safarka ganacsiga caalamiga ah ayaa kor u kacaya 26% sanadkan waxaa ku xigi doona koror dheeri ah oo ah 34% sanadka 2022.
Socdaalkii ganacsiga waxaa si aan xad lahayn u saameeyay COVID-19 wuuna ka gaabiyay inuu dib u bilaabo.
Waa muhiim in dhammaan daneeyayaasha ay ku biiraan xoogaga si ay xal ugu helaan gargaarka soo kabashada safarka ganacsiga.
Ganacsiyada safarka ee ganacsigu waa inay hagaajiyaan qaabka dakhligooda, balaadhiyaan diiradda juqraafiga iyo horumarinta adeegyada dhijitaalka ah.
Kharashaadka safarka ganacsiga ee adduunka oo dhan ayaa u muuqda inuu kor u kacayo in ka badan rubuc sanadkan oo uu gaadho saddex meelood laba meel heerarkii hore ee masiibada marka la gaadho 2022, sida uu qabo Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC).
Saadaasha ayaa ku timid warbixin cusub oo WTTC ah iyadoo lala kaashanayo McKinsey & Shirkadda oo loo yaqaan 'Laqabsiga Cudurka Covid-19: Muuqaalka Safarka Ganacsiga'.
Waxay ka soo qaadanaysaa cilmi-baadhis, falanqayn iyo waraysiyo qoto-dheer oo lala yeesho hoggaamiyeyaasha ganacsiga Safarka & Dalxiiska si ay awood ugu siiso ururrada inay u diyaar garoobaan socdaallada shirkadaha ee adduunka ka dambeeya masiibada.
Socdaalkii ganacsiga waxaa si aan xad lahayn u saameeyay COVID-19 wuuna ka gaabiyay inuu dib u bilaabo. Marka la eego in safarka ganacsigu uu muhiim u yahay qaybo badan oo ka mid ah dhaqaalaha caalamiga ah, waxaa muhiim ah in dhammaan daneeyayaasha ay ku biiraan xoogaga si ay u helaan xalal ka caawiya soo kabashada.
Laakiin tani waxay timid ka dib 61% burbur ku yimid kharashka safarka ganacsiga sanadka 2020, ka dib markii la soo rogay xayiraado safar oo ballaaran oo leh kala duwanaansho heer gobol ah oo ku saabsan soo kabashada adduunka.
Si loo dedejiyo soo kabashada safarka ganacsiga, warbixintu waxay ku talinaysaa ganacsiyadu inay hagaajiyaan qaababka dakhligooda, ballaariyaan diiradda juqraafiga, iyo horumarinta adeegyada dhijitaalka ah.
Caqabadda la wadaago ee soo celinta safarka ganacsiga waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa iskaashiga socda iyo iskaashiga qaybaha gaarka ah iyo kuwa guud iyo kobcinta xiriirro cusub.
Julia Simpson, Madaxa WTTC & Madaxweynaha, ayaa yiri: "Safarka ganacsigu wuxuu bilaabay inuu soo qaado. Waxaan filaynaa inaan aragno saddex meelood laba meel dhammaadka 2022.
"Safarka ganacsiga si xun ayaa loo garaacay, laakiin cilmi-baaristeenu waxay muujineysaa booska rajooyinka Aasiya Pacific iyo Bariga Dhexe marka hore laga bilaabo bilowga."
Iyadoo la tixgelinayo sanadkan iyo kan xiga. WTTC Xogta ayaa muujineysa gobollada adduunka ee hormuudka ka ah soo nooleynta safarka ganacsiga, ee uu hoggaamiyo Bariga Dhexe:
Bariga Dhexe - Kharashaadka ganacsiga ayaa lagu wadaa inuu kordho 49% sanadkan, oo ka xoog badan kharashka wakhtiga firaaqada ee 36%, oo ay ku xigto 32% korodhka sanadka soo socda
Asia-Pacific - Kharashaadka ganacsiga ayaa lagu wadaa inuu kordho 32% sanadkan, iyo 41% sanadka soo socda
Yurub – Waxaa lagu wadaa inay kor u kacdo 36% sanadkan, kana xoog badan kharashaadka wakhtiga firaaqada ee 26%, oo ay ku xigto 28% kor u kaca sanadka soo socda
Afrika – Kharashaadka ayaa lagu wadaa inuu sare u kaco 36% sanadkan, taasoo xoogaa ka xoog badan kharashaadka xilliga firaaqada oo ah 35%, oo ay ku xigto 23% kororka sanadka soo socda
Ameerika - Kharashaadka ganacsiga ayaa la filayaa inuu kordho 14% sanadkan, iyo 35% sanadka 2022.
Warbixintu waxay faahfaahisay sida kharashaadka la xidhiidha safarka caalamiga ah uu si weyn hoos ugu dhacay laga bilaabo 2019 ilaa 2020, taas oo ay ugu wacan tahay COVID-19 iyo xannibaadaha socda ee dhaqdhaqaaqa caalamiga ah.
Sanadkii la soo dhaafay, waaxda Socdaalka & Dalxiiska waxaa soo gaaray khasaare dhan US$4.5 tiriliyan, in ka badan 62 milyan oo qofna waa ay waayeen shaqooyinkoodii. Kharashka soo-booqdaha guduhu wuxuu hoos u dhacay 45 boqolkiiba, halka kharashka martida caalamiga ahi uu hoos u dhacay 69.4 % aan hore loo arag.
Warbixinta WTTC waxay kaloo muujinaysaa isbeddello la taaban karo 18-kii bilood ee la soo dhaafay, gaar ahaan baahida, saadka, iyo guud ahaan jawiga shaqada ee saameeya safarka ganacsiga.
Baahida safarka ganacsiga ayaa ka gaabisay soo kabashada marka loo eego wakhtiga firaaqada iyo siyaasadaha shirkadu waxay sii wadaan inay saameeyaan baahida safarka ganacsiga iyadoo loo eegayo xayiraadaha safarka qaranka.
Faafida COVID-19 sidoo kale waxay horseed u noqotay isbeddel, u horseeday u dhaqaaqida dhijitaalka ah oo markaa beddela saadka safarka ganacsiga ee suurtagalka ah maadaama dhacdooyinka isku-dhafka ahi ay noqdaan caado cusub.
Deegaanka ka hawlgala ayaa sidoo kale noqday mugdi badan iyadoo baahi weyn loo qabo in la caddeeyo xeerarka iyo xeerarka lagama maarmaanka u ah in la oggolaado socdaalka caalamiga ah ee aan la xannibin.
Si kastaba ha ahaatee, waaxaha qaar ayaa ka fiicnaaday kuwa kale ee leh dib-u-soo-celin hore oo ay ku jiraan wax soo saarka, daawooyinka, iyo shirkadaha dhismaha iyada oo ku jihaysan adeegga iyo warshadaha aqoonta oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka, waxbarashada, iyo adeegyada xirfadeed ay u badan tahay inay la kulmaan carqalad muddo dheer ah.
Warbixintu waxay carrabka ku adkeynaysaa sii socoshada muhiimadda socdaalka ganacsiga iyo kharashaadka ay ka soo saarto kobaca dhaqaalaha adduunka.
Falanqaynta ayaa muujineysa in sanadka 2019, inta badan wadamada waaweyn ay ku tiirsanaayeen safarka ganacsiga 20% dalxiiskooda, 75 ilaa 85% ka mid ah waa gudaha.
In kasta oo safarka ganacsigu uu ka dhigan yahay kaliya 21.4% ee socdaalka caalamiga ah ee 2019, waxay mas'uul ka ahayd kharashka ugu badan ee meelo badan, taasoo ka dhigaysa mid muhiim u ah soo kabashada dhammaan qaybta safarka iyo daneeyayaasha badan.
Safarka ganacsigu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah adeega loo fidiyo shirkadaha diyaaradaha iyo huteelada heerka sare ah waana lagama maarmaan in ay soo saaraan dakhligooda.
Faafida ka hor, safarka ganacsigu wuxuu ahaa qiyaastii 70% dhammaan dakhliga adduunka ee silsiladaha hoteellada ugu sarreeya halka inta u dhaxaysa 55 iyo 75% faa'iidooyinka diyaaradda ay ka yimaadeen safarro ganacsi, kuwaas oo ka kooban 12% rakaabka.
Jane Sun, oo ah madaxa fulinta ee Trip.com, ayaa tiri: "Shiinaha, safarka ganacsigu si xawli ah ayuu u socdaa. Ganacsiga safarka ee shirkadda Trip.com Group dhab ahaantii waa mid ka mid ah qaybahayaga kobaca ugu dhaqsaha badan, marka dadku wali waxay u baahan yihiin inay is arkaan si ay ganacsi u sameeyaan oo ay u xidhaan heshiisyada. Waxaan sii wadnaa in mar haddii ganacsigu caadi ku soo noqdo, waxaan rajeyneynaa xitaa kobac ka sii xoog badan marka loo eego heerkii hore ee COVID. ”
Chris Nassetta, Madaxweynaha & Maamulaha Guud Hilton, wuxuu yiri: "Ku soo laabashada safarka ganacsiga waxay muhiim u noqon doontaa ka soo kabashada warshadeena masiibada.
"Waxaan sii wadeynaa inaan aragno horumarka sii kordhaya, warbixintan waxay muujineysaa sida safarka ganacsigu uu muhiim ugu yahay dhaqaalaha adduunka. Safarka iyo dalxiisku waxay sii wadi doonaan inay horumariyaan malaayiinta adduunka oo dhan - gaar ahaan marka dadku bilaabaan inay mar kale safraan."
WTTC waxay aaminsan tahay inta safarka ganacsigu soo laaban doono, soo kabsashadiisa aan sinnayn waxay yeelan doontaa saameyn muhiim ah oo ku saabsan socdaalka iyo dalxiiska caalamiga ah, taasoo ka dhigaysa iskaashiga dadweynaha ee gaarka ah xitaa mid aad muhiim u ah bilaha iyo sanadaha soo socda.